Dolphinarium (Novorossiysk) - Sea wokwenama nenjabulo
Novorossiysk - ukusebenza lamachweba. Yena akubhekwa yokungcebeleka. Ngakolunye uhlangothi kukhona ulwandle, okuyinto enkulu ngisho njengomkhumbi lapho kunesivunguvungu. Ingasaphathwa mayelana epaki izinyoni nezilwane kanye ihlengethwa. Novorossiysk - yindawo lapho ungahlala ukubaleka esenzeka ekuphileni kwansuku zonke ukuhlela iholide.
izivakashi Lapho abamenyiwe
Okokuqala Yiqiniso, kolwandle. Yini enye engcono kunalokhu idiphu emanzini olwandle? Khona-ke kufanele aye le Sudzhukskaya eluka 1. Kukhona dolphinarium e Novorossiysk. Ikheli ke, siye okuthiwa kakade: Sudzhukskaya Amathe (Malaya Zemlya). It okungukuthi Awukude idolobha kanye namashumi amahlanu amamitha ukusuka olwandle. Kukhona ehlanzekile ukhululekile, ephephile, futhi kukhona yokupaka elula. Ukuze uthole isipiliyoni entsha, kufanele uvakashele dolphinarium. Novorossiysk - idolobha lapho bazonikezwa smart umhlangano abaqeqeshiwe izilwane.
Lapho kukhona kuhanjiswa, izindleko ukuya
Zonke izinsuku zeviki ngaphandle ngeMisombuluko, ukuzijabulisa evuleleke emphakathini. Dolphinarium (Novorossiysk) amanani cishe ihora isethulo esungulwe ngayo embusweni: ruble 600 omdala. Ukuze umntwana kuze kube iminyaka emine nhlobo. Intengo ithikithi kungenxa yokuthi izilwane kufanele nje bondliwe, ingasaphathwa amaholo abasebenzi.
Kanjani Impilo Novorossiysk Dolphinarium Sea
Le ndawo yokudlela ethokomele ungaphakathi ukuma yemidlalo ngaphansi esibhakabhakeni evulekile. Izethameli hhayi kuphela iwashi isethulo, okuyinto kungabonwa ngokuvakashela Dolphinarium. Novorossiysk - edolobheni libalele kakhulu futhi efudumele, ngakho nakupavshis ogwini, elula ezinhle imisipha yakho, ungakhululeka bese yokuthamela ngaphansi imisebe efudumele kwelanga.
A kancane ngamahlengethwa
Amahlengethwa awazona zihlakaniphile. Ngokusho ekuhlakanipheni, asethathelé izindlovu, ibhubesi inkosi yezilwane nezinkawu onamileyo. Bachaza nezinye ikhwela ngamunye. Phakathi kokuqeqesha ihlengethwa ongamtshela umsindo umfowabo, lapho kubalulekile ucindezela isinyathelo, kwesokunxele noma kwesokudla ukuze uthole inhlanzi.
Baye basungula amaza omsindo, futhi ngoba kulula ukuba aqaphele ubukhulu nezingqinamba uyibike othile.
Dolphins bayakwazi ukulingisa umsindo emangalisayo. Kusukela kubo, ungezwa umsindo umnyango creaking. Bayakwazi ukwenza umsindo izinsimbi, gurgling amanzi ngisho inkulumo yomuntu kanye uhleko.
Amahlengethwa awazona lula ngekhanda ukuma, sikwele, ibhola. Futhi-ke ungayididanisi into ngakuthathu nge sibalo flat.
Banezinhliziyo iso ukulinganisa okukhulu. Ngakho-ke amahlengethwa deftly iphambana hoops, noma aphonse ibhola singene ekhaleni kubhasikidi.
On lezi nezinye abaqeqeshi amakhono umsebenzi wokwakha ukuthi bamukele Dolphinarium. Novorossiysk bangaziqhayisa yabo kahle ehlelekile umsebenzi.
Ukumelwa e Novorossiysk
Uhlelo kusekelwe Acrobatic kanye stunts ome njengeqanda ukuthi enze ezihlakaniphile Black Sea amahlengethwa bottlenose amahlengethwa noMike Bell, eMpumalanga Ekude, imikhomo Beluga, ulwandle ingonyama iBaikal uphawu Amalotha. Phakathi isethulo labetibambile Raffles ngezipho. Ungakhulula esihlalweni sakhe ifotho abaculi zasolwandle, sibhukude nawo, noma isikebhe.
Zonke isethulo ubheka esisodwa, kanye nenzalo enganciphi. Ngo Novorossiysk Dolphinarium inikeza emizweni ezintsha futhi engavamile futhi Yiqiniso, injabulo nentokozo.
Ibhuloho "Rainbow" eTokyo: incazelo, umlando, izithombe
Resort Cosy Mishor - a Izibuyekezo emangalisayo iholide
Phuket ngo-Okthoba: Izibuyekezo
Olwaluhlala whirlpools, izimvu zamanzi nezimfudu
Almaty engcono ski resort
I-ginger ewusizo kakhulu. Izakhiwo zokwelapha kanye nokuphikisana
New eMoscow ibalazwe kaMasipala ne CIT: Ingabe kulula ukuhamba?
X: Ukuzalwa kabusha: ukudlula umdlalo, imfashini
Umthungi wezingubo sika umbusi Amatebhe: ukusika entsha kanye nokulungisa imikhiqizo siphelile
Kungakhathaliseki ukuthi kuyinto evamile, uma, esikhundleni nyangazonke - a olungaphelele osenyameni brown?
Njengoba kuboniswa soy anda umthamo wegazi lesiguli